शारीरिक सम्बन्ध राख्न उमेर हद् कति हुन्छ ? याैनविज्ञ यसो भन्छन onlinedarpan.com
Friday 17th of September 2021 / 01:11:28 AM
हास्यरसले भरिएको यो दृश्यले दर्शकलाई हसाउने काम मात्र गरेको छैन, यसले युवा पुस्तामा ‘बाबुआमा ४०/५० वर्षको उमेरमा कसरी सेक्स गर्न सक्छन् ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यो फिल्मले युवाहरूका मनमा से*क्सका वारे नयाँ बहस चलाएको छ ।
अभिभावकको सेक्स जीवनका वारेमा सोध्दा २८ वर्षीय मुकुलको प्रतिप्रश्न छ ‘के त्यो उमेरमा सेक्स पावर कम हुदैन ?’ यसका वारे चर्चित याैनविज्ञ डा. प्रकास कोठारी भन्छन् ‘जबसम्म श्वासप्रश्वास चलेको हुन्छ, तबसम्म मानिसले सेक्स गर्न सक्छ, किनभने सेक्सको कुनै उमेर हद् वा एक्सपायरी डेट हुदैन ।
मसंग त ८८ वर्ष सम्मका मानिस आफ्नो सेक्स परफर्मेन्स बढाउन आउँछन् । हरेक वर्ष ५ देखि १० जना ८५ र ९० वर्षका यस्ता मानिस म कहाँ आउँछन् ।’
यसमा यदी कुनै बृद्धले सोच्यो की अहिले म जवान छु, तब उसको त्रियाशिलता राम्रो हुन्छ । त्यही यदी कुनै जवान मानिसले आफू बुढो भएको सोच्छ भने उसको सेक्स परफर्मेन्स घट्छ । तर, ३०र४० प्रतिशत असर तपाइको दिमागी स्थिति, तपाईको हार्मोनको स्थितिमा पनि निर्भर हुन्छ ।
तर, हर्मोनजस्ता समस्याका समाधान खानपिनले पनि गर्न सक्छ । रक्त सञ्चार कम भए भियाग्राको साहारा पनि लिन सकिन्छ ।’
त्यसकारण यसको अर्थ हो कुनै पनि उमेरमा सन्तान सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ ? डा. कोठारी भन्छन् ‘जहाँसम्म सन्तान पाउने उमेरको कुरा छ, पुरुष ९० वर्षको उमेरसम्म बाबु बन्न सक्छन् । तर महिला त्यतिबेलासम्म आमा बन्न सक्छिन् जबसम्म उनको महिनावारी चल्छ । आमरुपमा यो उमेर ४०र५० वर्षको हुन्छ ।’